Home News Maareeyaha Garoonka Diyaaradaha Magaalada Jowhar oo dilay xaaskiisa oo xaamilo aheyd
Maareeyaha Garoonka Diyaaradaha Magaalada Jowhar oo dilay xaaskiisa oo xaamilo aheyd
Wararka naga soo gaaraya Magaalada Jowhar ayaa waxa ay sheegayaan in Maareeyaha Garoonka Diyaaradaha Magaalada Jowhar Ibraahin Maxamed Cali (Cali Dheere),uu xalay Xaafadda Hanti wadaag ku dilay Xaaskiisa oo Xaamilo aheyd.
Dadka degaanka ayaa xaqiijiyay in haweynda la dilay lagu Magacaabi jiray Jamiilo Sh.Cali Ibraahin oo aheyd xaaska Ibraahin.
Dhowr Xabadood ayaa la sheegay in uu Madaxa kaga dhuftay Xaaskiisa.
Previous articleGuddoomiye K/Xigeenka labaad Mudane Mahad Cawad waa qof Ceynkee ah?
Next articleWasiirka Amniga Maamulka Koonfur Galbeed oo Musharixiinta uga digay iney shaki galiyaan amaanka Magaalada Baydhabo
Sacuudiga oo war kasoo saaray dilkii Wariye Jamaal Khashoggi (Aqriso)